Mbupu & Mbuga | Radị Rave
(A) ship na-ebufe ụwa niile?
Ee, anyị na-ebufe ụwa niile. A na-eziga ụgbọ mmiri niile si n'ụlọ nkwakọba ihe New York site na USPS ma kwụọ ụgwọ dabere na adres mbupu.
(B) Kedụ mgbe m nwere ike ịtụ anya ngwungwu m?
Haziri ma nyefee iwu niile n'ime awa iri abụọ na anọ (ewepụghị ụbọchị ụka). Can nwere ike ịtụ anya ka ngwugwu gị rute dabere na nhọrọ mbupụ ịhọpụtara dị ka egosiri n'okpuru.
Mbupu n'ime United States:
Anyị na-enye Mbupu n'efu maka iwu karịrị $ 150 na-eji mbupu ala. Oge nnyefe dị n'ime ala bụ 5 ruo 7 Businessbọchị Azụmaahịa - US naanị. May nwere ike ịhọrọ Mbupu mbu iji nata usoro gị n'ime mkpụrụ ụbọchị azụmaahịa abụọ (kama itinye ego).
Nke a bụ ọnụego mbupu mbu anyị:
Ihe abuo rue abuo - USB kacha mkpa ozi (ato ubochi ato) - $ 1
Ihe abuo rue abuo - USB kacha mkpa ozi (ato ubochi ato) - $ 3
Ihe abuo rue abuo - USB kacha mkpa ozi (ato ubochi ato) - $ 6
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka iwu gị bịarute ngwa ngwa, anyị na-ebufe ụgbọ mmiri Express Mail maka nnyefe ụbọchị ọzọ.
Express Mail: Biko mara na a ga-eburịrịrịrịrịrịrị ihe omume iri tupu elekere iri nke ụtụtụ nke ọ bụla maka iwu ị ga-aga otu ụbọchị ahụ. Ọ bụrụ na etinyere iwu ka ọ bụrụ oge mbibi ga-ebugharị ụbọchị azụmaahịa na-esote. Achọrọ mbinye aka mgbe nnata.
Ihu mbu mba (ihe 1-3) $ 35.00
Ibu ụzọ tinye n’ime Ọkara (4-6 ihe) $ 45.00
Ibu ụzọ bukwara ibu (Nnukwu) (7-9 ihe) $ 53.00
Ibu ụzọ mee ihe (X-Large) (ihe 10+) $ 70.00
*A ga-ezipụ ahịa ahịa n'ime awa iri anọ na anọ ruo iri anọ na anọ (iri anọ na anọ) tupu oge a kara aka ga - ewe ụbọchị isii 24-48 iji rute.
Want chọrọ ihe gị oge adịghị anya? Obi dị anyị ụtọ inye aka. Zitere anyị email ka anyị nwee ike ịhazi maka nnyefe ngwa ngwa.
Biko mara na anyị anaghị akpata ihe ọ bụla na-egbu oge ma ọ bụ ụgwọ n'ihi Customs. Biko kpọtụrụ gọọmentị mpaghara gị ma ọ bụ ọrụ nzipu ozi maka ozi ndị ọzọ gbasara omenala na ọrụ ndị ị nwere ike ịbanye na obodo gị.
(C) Kedụ ka m ga-esi debe iwu m?
Ozugbo enyerela gị iwu, a ga-ezitere gị email ozi nwere ozi nsuso. Biko kwe ka awa 24-48 zụọ ahịa maka nkọwa nke mbugharị gị na USPS.
(D) Kedụ ka m ga-esi mata ma ọ bụrụ na natara ikike m?
Na mmecha nke iji gị, a ga-eziga ozi nkwenye gị iji kọwaa nkọwa zuru ezu na ọnụ ọgụgụ mbugharị ụgbọ mmiri na email ị nyere n'oge ndenye ọpụpụ. Ọ bụrụ n’ajụjụ ọ bụla biko kpọtụrụ ndị ọrụ nkwado anyị na shop@stylerave.com.
Ọ bụrụ na ị na-eche mmeghachi omume n'aka anyị, biko lelee folda spam gị. Dị ka email anyị nwere ike kwụsị ebe ahụ oge mbụ anyị zitere gị email.
(E) Gini nwere ike ime ma ọ bụrụ na edobeghị usoro m?
Ọ bụrụ na mgbe ịkpọtụrụ USPS na akara nsuso gị ị ka chọrọ enyemaka gbasara ịchọta ebe gị, wee nwee ike ịgwa anyị okwu na shop@stylerave.com otu n’ime ndị nnọchi anya anyị ga-eji obi ụtọ nyere gị aka.
Biko mara na anyị anaghị ahụ maka iwu nke ụlọ ọrụ mbupụ furu efu, adreesị adabaghị na nke ọma, ma ọ bụ ngwugwu ekwuputaghị / weghachiri.
Pịa ka ị gaa n'ihu ịzụ ahịa na Shoplọ ahịa Style Rave.
Iji mụta gbasara Iwu Iwu Ndị Ahịa anyị, pịa ebe a.